Nzira yekufananidza sei paAmazon uye kuva mutengesi anobudirira kune imomo?
Ngatishandisei - kana uchida kunzwisisa maitiro ekutongesa zvakanaka kuAmazon semutengesi anobudirira chaizvo, unofanirwa kutora mutsara unotevera. Ndinoreva kuti ecommerce yakawanda uye SEO nhengo dzevanhu (uye kunyange vatengi-nguva-vatengesi) vanowanzoregeredza mukana mukuru - nokuisa pfungwa paGoogle search injini. Ichokwadi, ndiyo nyika inotsvaga. Asi chinhu ichocho ndechekuti kana uri kutengesa kuAmazon, iyi yakazara pamusika yemusika inofanira kuva yakakosha zvikuru kwauri, pane chimwe chinhu chipi zvacho. Sei? Kunyanya nokuti kana zvichisvika kunyatsotsvaga zvigadzirwa zvakatengeswa, Amazon ine chimwe chinhu katatu zvimwe kutsvaga izwi. Anonakidza, zvakarurama? Saka, pasi apa ndichagovera chikamu chezivo yakakunakira iwe kuti uzive kutarisa zvakanaka paAmazon kuti pakupedzisira uve mutengesi chaiyo wekutengesa kutengesa uko - gnuf no deposit bonus.
Nzira Yokuratidza Sei Zvakanaka paAmazon
Chokutanga, regai titarise kuburikidza nekusiyana kwakakosha pakati pekutsvaga pazvinhu zvikuru zvinotsvaga (saGoogle pachako), uye kuti ungatsigira sei kuAmazon - yakatorwa pamwero.
Kutendeuka uye Kugutsikana Kwevashandi
Pamberi pezvimwe zvinhu, chinangwa chikuru chekusiyana pakati peGoogle neAmazon ndechokuti chikuru chekutsvaga injini yakagadzirirwa zvikuru kutengesa matanho - kukupa mhinduro dzinokurumidza nekuita kuti zvive zvakanaka kudzoka nokuda kwekutsvaga kutsvaga kuitira kuti iwe uite zvakanyanya kutsvakurudza, uye pakupedzisira - kupa zvakawanda kuchitsvaga pazvivako. Somugumisiro, maGoogle matrikiti ekubudirira ari kuenderera mberi zvakapoteredza nguva inoshandiswa kuburikidza nemushandisi anoshanyira, pamwe nekudarika-kuburikidza nehuwandu. Panguva imwecheteyo, zvakadaro, Amazon inonyanya kuisa pakupa mari yakawanda kana marita akawandisa akaenzaniswa nechikumbiro choga choga chekupfurikidza kune chimwe chigadzirwa chiri kutengeswa pamusoro apo. Zvinoreva kuti Amazon inowanzogadzirisa migumisiro yayo yekutsvaga kuitira kuti vamwe vatengi vangave vakakwanisa kuchinjwa kubudirira kuva vatengi chaivo. Ndicho chikonzero kana iwe uchida kuziva kuti ungatengesa zvakawanda sei kuAmazon - unofanirwa kuisa pfungwa pakuvandudza kutendeuka kwako, kutanga uye mberi. Zvichida nokuti kubva pakuona kweA9 kutsvaga shanduro yekushandura, kuva nekushandura kwakawanda kunoreva kupa mari yakawanda ku Amazon ecommerce bhizinesi platform.
Maitiro eAmazoni ekushanda uye kukoshesa
Kazhinji kazhinji, maitiro makuru eAmerica akaparadzaniswa kuva mapoka maviri akasiyana - kukosha. Uye pano tava kusvika pakupedzisira - iwe unofanirwa kujekesa pakati pezvinhu izvi zviviri kuti unzwisise kuti ungatsigira sei ma Amazon. Pano ivo.
Kuita Maitiro - zvinhu zvose pamusoro pezvinhu zvikuru zvekushanda (kutendeuka kwaro pachako, pamwe chete nemutengo wemiti nemifananidzo) haisi kunyanya kuoma. Taura zvakajeka, chimwe nechimwe chezvinhu izvi chichapa chiratidzo chinoshamisa kuAmazi kuti chigadzirwa chako chinogona kutengesa zvakanaka, kana yakarongwa zvakanaka.
Kukosha Kwezvinhu - iyi iyi inomirira minda mikuru yezvigadzirwa zvepaji peji yako yakashandiswa neA9 kuti uone kana chigadzirwa chako chiri chakanaka kumunhu anoshandisa. Hezvino zvinhu zvakakosha zvekunyoresa kwako izvo zvinoratidzirwa sezvakakosha zvekukosha: Product Title, Brand, List of Bullet Points, Product Description, Backend Search Terms, Zita rekutengesa, Setup, Daily Process, Filter Fields, Customer Reviews, se pamwe neZvose Sales Rank yako.